Ugaandaa - BBC News Afaan Oromoo
Barataan Pirezidant Museeveeniin Twitter gubbaa 'block' na godhan jechuun himate
Lammiin Yugaandaa Ameerikaatti barachaa jiru, Pirezidantiin Yugaandaa Yoweerii Museeveenii Twitter irraa na ugguraniiru jechuun himachaanii jira.
Harmee lakkuun daha osoo jettu shan deesse
Haati lakkuun daha jettee osoo eegduu dubartii sadiifi dhiira lama walumaa gala ijoollee shan godhatte.
Yugaandaafi Zaambiyaan Huawei waliin basaasuu jedhame
Yaandaafi Zaambiyaa gabaasa dhaabbata Chaayinaa kan ta'e Huawei waliin paartiilee mormitootaa basaasuu jedhe haalan.
Akkatti baalleen guchiifi calleen waldhabdee gosaa biyyoota afur keessatti dhalatuf furmaata ta'e
Hawaasni 'Ateker' biyyoota afur irraa walitti dhufe Kaaba Keeniyaatti festivaala guyyaa afurif taasifamu irratti hirmaataa jiru. Gosoonni kunneen afaaniifi aadaa tokko qabaatanis yeroo adda addaa walitti bu'aa turan.
Buruundiin 'hojjetoota adda-durummaan socho'aniif' talaallii Iboolaa kennaa jirti
Buruundiin hojjetoota fayyaasheetiif talaallii dhukkuba Iboolaa ittisu kennuu jalqabuushee Dhaabbanni Jaarmiyaa Addunyaa (WHO) beeksiseera.
Saawwan Ugaandaa waraqaa ragaa dhalootaa argachuuf
Gaazexaan 'Daily Monitor' jedhamu akka gabaasetti, saawwaniif waraqaalee ragaa kan dhalootaa baasuun kan barbaachiseef, akka Danbiiwwan Gamtaa Awuroppaan (EU)n barbaadutti saawwan kan haala salphaa ta'een hordofuun akka danda'amu ulaagaalee guutuuf jedhameeti.
Yugaandaatti daa'imti Iboolaaf wallaanamaa ture boqatee, kanneen lama ammoo qabamuun himame
Namoota dhibbaan lakkaa'aman DR Koongoo keessatti kan galaafate vaayirasiin Iboolaa Yugaandaa keessatti yeroo jalqabaaf daa'ima waggaa shanii irratti argameera.
Kantiibaan magaalaa Kaampaalaa tarkaanfiin fudhatamuu eegale kun yakkoota quunnamtii saalaa fi sarbamiinsa mirga daa'immaniin wal qabatee raawwataman to'achuuf ni gargaara jedhan.
Yugaandaa: ''Waggaa 26 'tti seera kittaana dhorku maaliif akkan cabse''
Kittaanni Yugaandaatti haa dhorkamuyyuu malee, Siilviyaa Yekoom amma kabaja argadheera jetti.
Manni maree Bakka Bu'oota Uummataa dhimma baqattootaarratti labsii kan dura ture haaromsuun baqattootni hojjetanii akka jiraatan hayyame.
Dubartiin sagantaa raadiyoo dhiyeessituu hedduu uummata biratti beekamtuu taate dubartii biraa akka heerumtuuf dhiibbaa irra ga'aa jiruuf qophii maallaqa walitti qabuu taasisaa jirti.
Pirezidantiin Yugaandaa Museviniin Kaani West fi Kim Kardaashiyaanif maqaa baasan
Ugaandaatti bakakkaan barattoota sadii galaafate
Kaaba-dhiha Ugaandaatti kan argamtu naannoo Yumbee keessa barattoonni sadii bakakkaan irra bu'ee lubbuu dhaban.
5 Onkololeessa 2018
Ugaandaa: Boobii Waayin biyyatti deebi'aa jira
Deeggartootni weellisaa beekamaa fi miseenasa paarlaamaa Ugaandaa Boobii Waayin akka hin simanne dhorkaman
Weellisaafi miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Yugaandaa Boobi Waayin, yeroo hidhaa turetti looltonni akka isa gidirsan dubbata.
Weellisaa beekamaa Yugaandaa Boobii Waayin irra deebiin qabame
Dargaggeessi miseensa paarlaamaa fi weellisaa beekamaa Yugaandaa himannaan biyya ganuu kan irratti baname biyyaa bahuuf otoo jedhuu qabameera.
31 Hagayya 2018
Manni murtii Yugaandaa weellisaa Boobii Waayin gadhiise
Miseensa paarlaamaa biyyattii kan ta'e weellisaa Boobii Waayin dhakaan konkolaataa pireezidantii biyyattii haleeleera jedhamee yakka biyya ganuun himatame.
Viidiyoo waraabameen loltoonni biyyattii mormii hidhamuu miseensa mana maree Boobii Waayin irratti gaazexeessaa suuraa kaasu tokko wayita reeban agarsiisa.
Ugaandaa: Fala dhibee busaa sadarkaa Afrikaatti badhaafame
Ogeeyyiin kalaqaa lammii Ugaandaa otoo saamuda dhiigaa xinnoo hin buusin dhibee busaa tooftaa ittiin qoratan uumanii jiru, dhibee balaafamaa fi hammaataa kana maqsuu keessatti kalaqa bakka olaanaa qabuu dha.
Yugaandaa: Dargaggeessa kuduraafi muduraa tortoree gatamuuf fala argate
Kuduraaleen akka maangoofi kan biroo takkaa mukarraa ciramanii gabaa argachuu baannaan tortoranii badu ture, Barataan ganna 23 waan fala ta'a jedhu kalaquu dubbata.